Ny fampahalalana lehibe momba ny fiatraikany Leuprorelin Acetate, Dosis
1. Inona no atao hoe acetate leuprorelin?
Ny ankamaroan'ny karazana homamiadan'ny prostaty dia miankina amin'ny hormonina testosterone hitombo sy hiparitaka amin'ny vatanao. Saingy, ny vovon-tsolika Leuprorelin acetate dia miasa amin'ny fanakanana ny famokarana hormonina testosterone izay manamora ny fampihenana ny fitomboan'ny sela homamiadan'ny prostaty ary koa ny fanamaivanana ny fanaintainana na ny fahasahiranana iainan'ny marary mandritra ny fikaony.
Etsy ankilany, ny Lupron dia ampiasain'ny vehivavy hitsaboana ny soritr'aretin'ny endometriozy, izay fantatra amin'ny anarana hoe fibroids utérine. Ny acetate Leuprolide sy ny fitondrana vohoka dia ahiana indrindra amin'ny vehivavy, aza mihinana an'io fanafody io raha manantena ny hiteraka ianao fa afaka miresaka izany amin'ny dokotera ianao. Lupron dia fanafody tsindrona izay tokony atsindrona ao amin'ny hozatra isaky ny 1-6 volana. Hamarino foana fa maka ny doka amin'ny dokotera ianao, saingy azonao atao koa ny miofana amin'ny fomba fampidirana ny tenanao amin'ny fitantanana doka mora foana amin'ny fampiononana ao an-tranonao.
Leuprolide acetate mividy dia mora azo amin'ny fivarotam-panafody an-tserasera sy ara-batana. Ny vidin'ny acetate leuprolide dia mety miovaova arakaraka ny toerana ividiananao azy. Na izany aza, torohevitra hatrany ny fahazoana ny fanafody mety amin'ny mpitsabo matihanina. Aza adino ny misotro tafahoatra na mampiasa diso ny leuprorelin acetate dia mety hiteraka voka-dratsy, ary tokony hialanao ny fandraisanao azy nefa tsy hanaovana fizahana ara-pitsaboana. Aretina mafy ny homamiadana ary tsy tokony hatahorana handray an-tsitrapo ny fanafody. Miresaha amin'ny dokotera raha mila fanazavana fanampiny momba izany leuprorelin acetate vovony levitra.
2. Fampiharana acetate Leuprolide
The fatra amin'ny leuprorelin acetate tokony atsofoka ao amin'ny vatanao amin'ny alàlan'ny hozatra. Ampiasao ny tsindrona insuline U-100 hitantanana ny fatrao ary ho azo antoka koa fa mampiasa syringes nomen'ny mpanamboatra ianao. Raha tsy maintsy mampiasa syringe hafa ianao, dia ampiasao ilay hany 0.5-mL azo ampiasaina. Aza adino fa ny vovon-tsavony acetate leuprorelin dia tokony afangaro araka ny nofaritan'ny mpanamboatra alohan'ny hampiasana azy. Ny fikororohana ny vahaolana dia mety tsy hanome anao fifangaroana ampy. Ny fifandraisana Leuprolide dia hanampy anao amin'ny fanatratrarana ny valiny tadiavinao fa hatrany amin'ny dokoteranao izany.
3. Ahoana no fiasan'ny acetate leuprolide?
Ny mekanisma acetate leuprorelin dia miankina amin'ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana. Ohatra, rehefa ampiasaina amin'ny fitsaboana homamiadana prostate dia mampihena ny famokarana hormonina testosterone, izay manampy ny fitomboana sy ny fihanaky ny sela homamiadana. Na dia vovony Leuprorelin Acetate (74381-53-6) Ny fampiasana dia tsy mahasitrana homamiadan'ny prostaty, manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainana sy ny fitomboan'ny sela homamiadana ao amin'ny vatanao izany. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia azo raisina irery, fa ny mpitsabo dia mamporisika anao hitondra izany miaraka amin'ireo fanafody homamiadana prostaty hafa mba hahitana vokatra tsara kokoa.
Na dia tsy nekena hampiasaina amin'ny vehivavy any amin'ny firenena sasany aza ny fanafody, dia voaporofo fa mahomby amin'ny fitsaboana ny endometriozy. Eto dia miasa ny zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famokarana estrogen ao amin'ny vatanao, izay fantatra amin'ny anarana hoe "estrogen surge". Eto, ny mekanisma fiasa acetate Leuprorelin dia mifantoka indrindra amin'ny fampihenana ny estrogen, hormonina tompon'andraikitra amin'ny fotoanao. Rehefa manomboka mihinana fatra acetate leuprorelin ianao dia hiakatra mandritra ny herinandro vitsivitsy ny tahan'ny estrogen, ary avy eo hidina ny tahan'ny estrogen. Ity dingana ity dia mety hampiato mandritra ny fotoana fohy ny fotoanao, ary vokatr'izany dia ho afaka ny soritr'aretina endometriozy.
Ny kanseran'ny nono acetate Leuprorelin kosa dia manampy amin'ny ady amin'ny aretina mahafaty amin'ny vehivavy. Na dia tsy antony mahatonga ny homamiadan'ny nono aza ny progesterone sy estrogen, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana ny fitomboany sy ny fiparitahany izy ireo. Ny famokarana ireo hormonina roa ireo dia azo ajanona amin'ny fomba fandidiana mba hanesorana ireo ovaire na fomba fitsaboana.
Ny hormonina mametaka vokarin'ny fihary pituitary dia mitarika ny famokarana progesterone sy estrogen an'ireo ovaire. Ny fampiasana leuprorelin acetate dia mampihena ny famokarana ny hormonina luteinizing, ka mampihena ny haavon'ny estrogen sy progesterone ao amin'ny vatanao. Midika izany fa hihena ny fitomboan'ny sela sy ny fiparitahan'ny sela homamiadana, ka ho mora hifehezana ny homamiadan'ny nono.
4. Ahoana ny fampiasana acetate leuprorelin?
Ny fitantanana leuprorelin acetate dia azo atao amin'ny fomba roa lehibe amin'ny alàlan'ny tsindrona mivantana na ny vovoka, izay mazàna averina aorina miaraka amin'ny solvent alohan'ny handraisana ny fatra. Ny dokotera no olona tsara indrindra mitondra ny fombanay roa, fa rehefa voaofana ianao dia afaka manao izany mora foana any an-trano.
Ny tsindrona acetate Leuprorelin dia fanafody efa niasa hatry ny ela izay tsindrona ao anaty intramuscularly ary tokony hotantanan'ny mpitsabo matihanina. Ny tsindrona dia omena indray mandeha isam-bolana na indray mandeha isaky ny 3, 4, na 6 volana miankina amin'ny toe-javatra misy anao. Etsy ankilany, ny tsindrona acetate leuprorelin indraindray dia azo omena ho fampiatoana maharitra efa fantatra amin'ny anarana hoe (Eligard) izay atsindrona ao amin'ny hozatrao isaky ny 1, 3, 4, na 6 volana.
Aorian'ny fizahana ara-pitsaboana, ny dokoteranao dia hanome torohevitra anao momba izany ary koa hanome fanafody fatra peptide vovoka tsara indrindra ho anao. Ny fotoana horaisin'ny tsingerin'ny fatranao dia ho fantatry ny dokoteranao ihany koa aorian'ny fandinihanao ny toe-pahasalamanao. Matetika ny tsindrona dia miovaova amin'ny marary iray.
Indraindray ianao dia mety manapa-kevitra ny hampiasa ny vovo-dronono leuprorelin, izay endrika mahery an'io fanafody mahery io koa izay manampy amin'ny ady amin'ny toe-pahasalamana samihafa, araka ny voalaza tetsy aloha. Na izany aza, ny vovoka acetate Leuprorelin dia tsy maintsy omanina tsara na averina alohan'ny hamindrana azy amin'ny hozatrao. Tokony hojerena ny vovoka ary tsy tokony hampiasa syringe voapoizina ianao. Rehefa manamboatra ny acetate leuprorelin dia ampiasao ny diloilo nomen'ny mpamokatra fanafody. Ahosiho ao anaty ny takelaka ilay plunger fotsy mandra-pahatongan'ny fihodinany, alao antoka fa mihazona ilay syringe ianao. Afaho izao ny diluent amin'ny alàlan'ny fanosehana miadana ny plunger mandritra ny 8 segondra mandra-pahatongan'ny topper voalohany ny tsipika manga eo afovoan'ny barika. Ataovy mahitsy ny syringe mandritra izao fotoana izao.
5. Leuprorelin acetate Dosage sy leuprorelin acetate Administration
Ny fitantanana leuprorelin acetate dia na dia fanindronana aza, ary tokony hahazo ny dosianao avy amin'ny mpitsabo ianao mba hahitana vokatra tsara kokoa. Raha miahiahy ianao fa manana aretina azo tsaboina amin'ity vovon-tsolika peptide ity dia aza mividy ary manomboka mandray azy raha tsy mandalo fizaham-pahasalamana. Leuprolide acetate mpanamboatra mety manondro ny fatra amin'ny fanafody amin'ny torolàlana momba ny fampiasana, saingy mety tsy ho anao izany.
Ny fatra atoro ho an'ny marary endometriozy dia 3.75mg, izay tokony atsindrona indray mandeha isam-bolana mandritra ny enim-bolana eo ho eo. Misy ihany koa safidy hafa izay ahafahan'ny dokotera manome sosokevitra 11.25mg, izay hitsindroka anao indray mandeha isam-bolana. Ny vehivavy mandray leuprorelin ho an'ny endometriozy dia tokony handinika ihany koa ny mandeha amin'ny fitsaboana hormonina, izay mety indrindra amin'ny fampihenana ny soritr'aretin'ny vasomotor sy ny fatiantoka mineraly taolana. Na izany aza, ny fandanjana ny tombotsoan'ny fitsaboana tsirairay avy dia tokony hatao lohalaharana ihany koa amin'ny fisafidianana ny fomba fitsaboana mety.
Aza adino, ny dokoteranao no olona mety nametraka fatra Leuprorelin ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy aorian'ny fizahana ny aretina. Indraindray ianao dia mety hotoroana hevitra hanombohana dosie ambany, izay azo ahitsy miaraka amin'ny fotoana aorian'ny fandinihana ny valin'ny vatanao. Leuprolide acetate sy ny fitondrana vohoka dia tsy avela satria ny fanafody dia mety hanimba ny zaza ao am-bohoka. Notoroana hevitra ny vehivavy mba tsy handray an'ity vovoka peptide ity rehefa antenaina izy ireo na rehefa mikasa ny bevohoka tsy ho ela.
6. Vokatry ny acetate Leuprorelin
Amin'ny tranga maro, rehefa mampiasa tsy ara-dalàna na misotro tafahoatra ny zava-mahadomelina ianao, dia hampidi-doza anao izany; na izany aza, ny tanjaky ny vatanao indraindray dia afaka mamaritra ny hamafin'ny vokatra. Toy izany koa no mitranga rehefa tsy manaraka ny torolàlana momba ny fatra ianao rehefa mandray acetate leuprorelin. Ny fampitandremana leuprolide dia mety miovaova arakaraka ny anton-javatra isan-karazany, toy ny lanjan'ny vatana sy ny fandeferana amin'ny vatana. Ny mpampiasa sasany dia miaina ny voka-dratsiny na dia mihinana fatra ambany aza ny fifandraisana amin'ny leuprolide raha ny hafa kosa dia afaka mandray fatra ambony ary mbola mankafy ny tombony azo.
Ho famaranana, ny leuprorelin acetate dia voaporofo fa zava-mahadomelina lehibe rehefa ampiasaina amin'ny tontolon'ny fitsaboana. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny fividianana acetate leuprolide ao amin'ny fivarotam-panafody akaiky anao indrindra ary azonao atao koa ny manafatra amin'ny fivarotana an-tserasera isan-karazany. Betsaka ny mpanamboatra sy mpamatsy acetate leuprolide eny an-tsena ankehitriny, fa ataovy izay hahazoana antoka fa manao ny fikarohana ianao mba hahazoana vokatra milay amin'ny vidiny mirary. The vidin'ny acetate leuprorelin miovaova arakaraka ny mpivarotra iray, ary izany no antony ilanao fikarohana alohan'ny hividianana ny fanafody. Na izany aza, aza mihinana homamiadan'ny tratra acetate leuprorelin alohan'ny hahazoana ny doka mety amin'ny dokotera.
Hira, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Ny vokatry ny leuprolide acetate amin'ny fiasan'ny ovarian aorian'ny fitsaboana simika cyclophosphamide-doxorubicin any amin'ireo marary premenopausal voan'ny homamiadan'ny nono: vokatry ny fizahan-toetra II. Oncology fitsaboana, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Fandinihana fatra iray hamaritana ny fahombiazana sy ny fiarovana ny 1, 2, ary 4 mg dienogest isan'andro ho an'ny endometriozy. Gazety iraisam-pirenena momba ny gynecology & Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Famolavolana leotrorelin acetate enim-bolana famolavolana amin'ny homamiadan'ny prostaty: tombana amin'ny klinika. Fitsabahana ara-pitsaboana amin'ny fahanterana, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Vidiny, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Fanabeazana abscess sterile mifandraika amin'ny fitsaboana leotrorelin acetate depot ho an'ny fahamaotiana eo amin'ny fahatanorana. Gazety momba ny jaza sy ny fahasalaman'ny zaza, 48(3), E136-E139.